बिकिनी शो हैन, प्रस्तुतिमा क्वालिटी चाहिन्छ-सरस्वती लामा भुजेल, गायिका – Everest Times News
बिकिनी शो हैन, प्रस्तुतिमा क्वालिटी चाहिन्छ-सरस्वती लामा भुजेल, गायिका
सोलु गार्माकी सरस्वती लामा भुजेल हालै ‘उत्तर–पूर्व’ एल्बम बजारमा ल्याएर चर्चामा आएकी छन् । एल्बमको शीर्ष गीत ‘उडी जाने हावा’ले र ‘नभए हुन्छ सुन’ले श्रोतादर्शक तान्न सफल भएको उनको भनाई छ ।
एल्बम विमोचनपछि उनलाई विभिन्न कार्यक्रममा सांगीतिक प्रस्तुति दिन निम्तो आउन थालेको छ । ‘पप रक’गीतमा आफ्नो भाग्य देखेकी उनी केही समय अघिदेखि नै संगीतमा साधनारत थिइन् । आफुलाई शास्त्रीय संगीतको विद्यार्थी बताउने सरस्वती ‘डान्सिङ नम्बर’ गीतहरुले बजार तताउने बताउँछिन् ।
एल्बममा चारवटा गीत भएपनि यसभन्दा अघि पनि उनले फट्टफुट्ट गीत गाइसकेकी छिन् । १० को हाराहारीमा गीत गाइसकेकी उनी अहिलेको चर्चाले संगीतमा अझै राम्रो गर्न हौसिएकी छन् । उनै सरस्वती लामासँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानीः
‘उत्तर पूर्व’ बजारमा आएपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
अहिलेसम्म राम्रै प्रतिक्रिया आइरहेको छ । एल्बममा ४ वटा गीत छन् । श्रोतादर्शकले ४ वटै गीत मनपराइदिनुभएको छ । यही एल्बमका कारण स्टेज कार्यक्रमको लागि निम्तो आइरहेको छ ।
कहाँ कहाँबाट आइपुग्यो निम्तो ?
काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम भइरहेका छन् । ती ठाउँमा निम्तो पनि मानिसकें । आफ्नै जिल्ला सल्लेरीबाट निम्तो आएको छ । मंसिर १८ गते सल्लेरीमा, २२ गते लुक्लामा निम्तो आएको छ । अहिले त स्टेज कार्यक्रमकै दौडधुपमा छु ।
पहिलो एल्बमबाटै ‘पप रक’ पस्किनुभयो, कसरी यहाँसम्म आइपुग्नुभयो ?
म पप रककै श्रोता हुँ । मलाई यही विधा मनपथ्र्यो । तर, म गीत नै गाउँछु भनेर यो ठाउँमा आइपुगेको होइन । साल्सा, जुम्बा डान्स सिक्दासिक्दै गायनले मलाई आकर्षण ग¥यो । शास्त्रीय संगीत सिकें । त्यसपछि पप रक गायनलाई छानें । अहिले स्टेजमा दर्शकहरु ‘डान्सिङ नम्बर’का गीतहरु नै मनपराउँछन् । यसैमा भविष्य देखेकी छु ।
शास्त्रीय संगीत सिकेर पप रकमा हाम्फाल्दा गुरु रिसाउनु भएन ?
शास्त्रीय संगीत सिकाउने मेरो गुरु निरास मगर । उहाँले मलाई पप रक विधा नै फाप्ने र यही विधा रोज्न सल्लाह दिनुभयो । उहाँकै सहयोग र सल्लाहमा मैले यही विधालाई छानेकी हुँ ।
एल्बममा गायिका, गीतकार, संगीतकार, मोडल, निर्देशक सबै तपाईं नै हुनुहुन्छ । एक्लैको एल्बमलाई सोलो एल्बम भन्छन्, सोलो एल्बममा अरुकै संगीत, गीत हुन्छन्, यो चाहि कस्तो खालको एल्बम हो ?
अब यसको नाम खोज्नुपर्ला । तर, मेरो गुरुले एउटा गीतमा संगीत दिनुभएको छ । यो गीतको शब्द पनि उहाँकै हो ।
गीतहरु कुन बेला लेख्नुहुन्छ ?
हिड्दा, यताउति पुग्दा, सुत्नै लाग्दा पनि गीत आउँछ । ती गीतहरु तानतुन गरी बनाउँछु । मिलाएर राम्रो बनाउँछु । त्यसपछि गुरुलाई देखाउँछु । अरुलाई पनि देखाउँछु । प्रतिक्रिया राम्रो पाएपछि त्यो गीत बन्छ ।
अरुको गीत गाइन्न त्यसो भए ?
गाउन सुरु गरिसकेकी छु । गुरुको गीत गाइसकेकी छु । अब अर्को एल्बमको लागि पनि गीत तीनवटा गीत तयार भइसकेको छ । त्यसमा पनि अरुकै गीत छन् ।
एल्बममा भएभरका काम सबै आफैले गर्नु भएको छ, यीमध्ये सबैभन्दा कुन गाह्रो लाग्दो रहेछ ?
गीत लेखन, मोडलिङ, निर्देशन, संगीत भन्दा भोकल दिन अलि गाह्रो छ ।
स्टेजमा गायिकाहरु अलि छाडा नै हुन्छन्, तर तपाई संयमित देखिनुहुन्छ नि ?
बिकिनी लगाएर मात्र राम्रो हुदैन । संगीतमा क्वलिटी चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले म बिकिनी शो गर्ने पक्षमा छैन ।